Capricorn ee Zodiac qadiimiga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa Diisambar 22 iyo Janaayo 20 waxaad tahay Capricorn. In this turjumaadda horoscope casriga ah ee zodiac xiddigiska, aad raacdo talada horoscope ee Capricorn si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, Xoolo, caafimaadka, iyo aragtida shakhsiyaddaada.
Capricorn waxay samaysaa sawirka hore ee Ridi ku biirtay dabada Kalluunka. Halkee ka yimi Kalluun-Riyaha?
Maxay ka dhigan tahay bilowgii?
Zodiac-kii hore, Capricorn wuxuu ahaa shanaad ee laba iyo tobanka xiddigood ee xiddigiska kuwaas oo sameeyay sheeko weyn. Waxaan aragnay in afarta xiddigood ee hore ay ahaayeen unug xiddigiyayaal ah oo khuseeya qofka Bixiyaha Wayn iyo colaadda dhimanaysa ee uu la leeyahay Cadawgiisa.
Capricorn wuxuu bilaabaa cutubka labaad kaas oo diiradda saaraya shaqada Bixiyahaan sida ay noo saameynayso. Cutubkan waxaynu ku aragnaa natiijadii – barakooyinka innagaga jira – ee ka soo hooyay guushii uu ka gaadhay cadowgiisa. Cutubkani waxa uu ku furaa Ri’ waxa aanu ku xidhaa wanAries) iyo labada dhexe calaamado khuseeya kalluunka (Aquarius & Pisces). Sidee ku habboon markaa in Capricorn uu had iyo jeer ahaa dhinaca hore ee Riyaha oo ku biiray dabada kalluunka.
Zodiac-kii hore, Capricorn wuxuu ahaa dadka oo dhan maadaama ay saadaalisay faa’iidooyinka uu heli karo qof kasta. Markaa xitaa haddii aadan ahayn Capricorn ee dareenka horoscope-ka casriga ah, sheekadii xiddigiska ee qadiimka ahayd ee ku dhexjirtay xiddigaha Capricorn waxay mudan tahay in la fahmo.
Capricorn Constellation ee Astrology
Capricorn waa koox xiddigo ah oo sameysa sawirka Riyaha oo lagu daray dabada kalluunka. Halkan waxaa ah xiddigaha sameeyay Capricorn oo ku xiran khadadka. Ma ku arki kartaa wax u eg kalluun ari ah sawirkan? Ma awoodo. Sidee qof xitaa u malayn karaa xayawaan isku dhafan oo ari-iyo-kalluun ah oo ka yimid xiddigahan?
Riyaha iyo kalluunku xataa dabeecad ahaan xidhiidh fog uma laha. Laakiin calaamadani waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha. Halkan waa zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano jir ah oo leh sawirka Riyaha-Kalluunka Capricorn oo ku wareegsan casaan.
Dendera Zodiac oo leh Capricorn ayaa ku wareegsan casaan
Sida xiddigihii hore ee zodiac, sawirka Capricorn ee Kalluun-Riyaha ma ahan mid iska cad oo ka mid ah xiddigaha laftiisa. Ma aha mid ku dhalanaysa kooxda xiddigaha. Halkii, the fikrad oo ah Kalluun-Rid-isku-dhaf ah ayaa ka hor yimid, wax aan ahayn xiddigaha. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha si ay u noqoto calaamad soo noqnoqonaysa. Laakiin waa maxay sababtu? Maxay ula jeedeen dadkii hore?
Sawirka Capricorn wuxuu muujinayaa riyaha oo madaxa foorarsan, iyada oo lugteeda midig ay ku laalan tahay jirka hoostiisa, wuxuuna u muuqdaa mid aan awoodin inuu kor u qaado bidixda. Waxa aad mooddaa in arigii dhimanayo. Laakin dabada Kalluunku waa mid jilicsan, foorarsan oo ay ka buuxaan firfircooni iyo nolol.
Capricorn Riyaha dhimanaya laakiin dabada kalluunka ayaa nool
Laga soo bilaabo bilawgii taariikhda aadanaha orgiga (iyo idaha) waxay ahaayeen habka la aqbalay ee loo bixiyo allabari Ilaah. Tauratu waxay noo sheegaysaa taas Xabiil, ina Aadan & Xaawa, wuxuu allabari ka bixiyey adhigiisa. Alle wuu aqbalay allabarigiisii ​​laakiin kii Qabil ma aqbalin. The Nebi Ibraahiim NNKH waxa uu bixiyey Ram (Ri ama Lax) Allena wuu ku furtay. Ilaahay wuxuu ku amray Hazrat Haaruun oo Nebi Muuse CS walaalkii ahaa sanad walba laba neef oo ari ah qaado. Mid waa la sadqeeyay oo orgigii baallaha ahaa wuu xoroobay. Kuwaas oo dhami waxay ahaayeen calaamado ina baraya in madax furasho nolol kale loo baahan yahay si ay nooga soo furtaan dheelitirka Miisaanka. Nabi Ciise Al-Masih, in allabarigiisa iskutallaabta dusheeda si mutadawacnimo ah noogu huraan.
Rigii Capricorn-ka ayaa u sujuuday dhimashada waxay calaamad u ahayd dadkii hore si ay u xasuusiyaan ballanqaadka soo furashada soo socda kaas oo noqon doona allabari. Isa al Masih NNKH wuxuu ahaa dhammaystirka calaamadda.
Laakiin waa maxay macnaha dabada kalluunka ee Capricorn? Si aan u qeexno waxaan eegaynaa dhaqan kale oo qadiimi ah – Shiinaha. Dabaaldegga Sannadka Cusub ee Shiinaha waxa uu dhacaa Jannaayo/February (qiyaastii wakhtiga Capricorn) waana dhaqan soo noqnoqda kumanaan sano. Xafladan ayaa lagu xusayaa qurxinta ay Shiinuhu albaabadooda ku laadlaadsan yihiin. Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada tan.
Kaarka – Sannadka Cusub ee Shiinaha
Qurxinta Sannadka Cusub ee ShiinahaSannadka Cusub ee Shiinaha – Kalluunka
Waxaad ogaan doontaa in dhammaan ay muujinayaan kalluunka. Kalluunka waxaa loo isticmaalaa Salaantooda Sannadka Cusub sababtoo ah, wakhtiyadii hore, kalluunku waxay ahaayeen calaamado nololeed, badan iyo fara badan.
Si la mid ah, Zodiac-kii hore, kalluunku waxay u taagan yihiin tirada badan ee dadka nool – dad badan – kuwaas oo loo bixiyey allabari.
Isa al Masih PBUH wuxuu isticmaalay sawir la mid ah kalluunka markuu wax baray dad badan oo uu allabarkiisu gaadhi doono. Wuxuu baray
47 Haddana boqortooyada jannadu waxay u eg tahay shabag badda lagu tuuray oo cayn walba lagu ururiyey. 48 Kan markuu buuxsamay ay nimanku xeebta ku soo jiideen, wayna fadhiisteen oo kuwii wanaagsanaa weelal bay ku ururiyeen, kuwii xumaana way tuureen.
Matayos 13: 47-48
Markii uu Nebi Ciise Al Maasiih NNKH sharaxay shaqada mustaqbalka ee xertiisa waxa uu yidhi
18 Markuu badda Galili ag marayay wuxuu arkay laba walaalo ah, Simoon kii Butros la odhan jiray iyo Andaros oo ahaa walaalkiis, iyagoo shabag badda ku tuuraya, waayo, waxay ahaayeen kalluumaystayaal. 19 Oo wuxuu ku yidhi, I soo raaca, waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jillaabta.
Matayos 4: 18-19
Labada jeer sawirka kalluunku wuxuu u taagnaa dad badan oo heli doona hadiyadda Boqortooyada jannada. Adiguna maxaad u diidaysaa?
Horoscope-ka Capricorn ee Qoraallada
Horoscope Waxay ka timid Giriigga ‘Horo’ (saac) oo markaa macnaheedu waa calaamadaynta saacadaha gaarka ah. Qoraallada nebigu waxay calaamad u yihiin Capricorn ‘horo’ siyaabo muuqda. Sababtoo ah Capricorn waa laba laab (Riyaha iyo kalluunka), Capricorn horo akhrisku sidoo kale waa laba laab: ah saacad ee allabari iyo saacad dad badan. Nebigu wuxuu calaamadeeyay saacada ugu horraysa sidan oo kale.
14 Goortii saacaddii timid ayuu fadhiistay, isaga iyo rasuulladiiba. 15 Markaasuu wuxuu ku yidhi, Aad baan u doonayay inaan cashadan Iidda Kormaridda idinla cuno intaanan xanuunsan. 16 Waayo, waxaan idinku leeyahay, Mar dambe tan ma cuni doono ilaa ay ku dhammaystiranto boqortooyada Ilaah dhexdeeda. … 20 Sidaas oo kale cashada dabadeed koobkuu qaaday isagoo leh, Koobkanu waa axdiga cusub oo dhiiggayga aawadiin loo daadshay,
Luukos 22:14-16, 20
Tani waa ‘saacaddii’ riyaha Capricorn. Saacaddan waxaa lagu calaamadeeyay Baxsadka Iidda Kormaridda in ka badan 1500 oo sano ka hor, markii dhiigga allabariga lagu rinjiyeeyay albaabbada si ay geeridu u gudubto. Taasi aad saacad Isa al Masih PBUH wuxuu daaha ka qaaday macnaha buuxa ee Iidda Kormaridda isagoo sheegay in dhiiggiisa sidoo kale loo daadin doono iyaga… iyo annaga. Isagu wuu dhiman lahaa si aan nolosha u helno, sida Kormaridda Muuse NNKH… sida riyaha Capricorn. Taasi saacad waxay keenaysaa tan xigta saacad – dad badan oo nolol leh.
14 Oo bal eeg, haddana waxaan arkay daruur cad, oo waxaan daruurta dusheeda ku arkay mid fadhiya oo u eg bini aadan, oo waxaa madaxa u saarnaa taaj dahab ah, oo gacantana wuxuu ku haystay manjo af badan. 15 Oo haddana malaa’ig kale ayaa waxay ka soo baxday macbudkii, oo waxay cod weyn ugu dhawaaqday kii daruurta ku fadhiyey, iyadoo leh, Manjadaada soo dir oo beerta goo; waayo, saacaddii beergooysku way timid; maxaa yeelay, midhihii dhulka oo la gooyn lahaa way bislaadeen. 16 Markaasaa kii daruurta ku fadhiyey wuxuu manjadiisii ku soo tuuray dhulka, oo midhihii dhulkiina waa la gooyay.
Muujintii 14: 14-16
Qorniinka nebiyadu wuxuu leeyahay tan saacad iman doona marka kuwa ku biiray allabariga Capricorn ka qayb qaadan doonaan beergooyska jannada dhamaadka da’da this. Tani waa saacada ku jirta masaalka Isa al Masih NNKH marka kalluunka la keeno shabagga. Labadan saacadood ee Ariga iyo Kalluunku isu dheelli tiran yihiin oo midba midka kale buuxiyo. Labadan saacadood waxay ku calaamadeeyeen Capricorn ee horoscope qadiimiga ah.
Akhriska Horoscope-kaaga Capricorn
Adiga iyo anigu waxaan codsan karnaa akhrinta horoscope Capricorn maanta iyadoo la raacayo hagida soo socota.
Capricorn wuxuu sheegayaa in ay jiraan wax badan oo nolosha ka mid ah marka loo eego isha. Haddii adiga ama aniga aan maamuleyno caalamka waxaa laga yaabaa in dhammaan sifooyinkiisu ay noqon lahaayeen kuwo toosan oo muuqda. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad aqbasho xaqiiqda ah in aniga iyo adiga midna aan mas’uul ka ahayn. Sida ay u jiraan shuruuc jireed oo xukuma dhaqdhaqaaqa meerayaasha, waxaa jira sharciyo ruuxi ah oo adiga ku xukuma. Waxaa ka wanaagsan in aad aqbasho xaqiiqadaas intii aad dagaalka sii wadi lahayd ama aad isku dayi lahayd inaad hareeraheeda ka baxdo. Haddii kale waxaad ogaan doontaa in ka-hortagga sharciyadan ay la mid tahay ka-hortagga sharciyada jireed. Waxaa hubaal ah inaadan rabin inaad ka hor imanayso horos ruuxiga ah ee aasaasiga ah.
Waxaa laga yaabaa in meel wanaagsan oo aad ka bilaabi karto la jaanqaadista sharciyadan ruuxiga ah waa in la muujiyo mahadnaq iyo mahadnaq halkii aad marka hore isku dayi lahayd inaad fahamto dhammaan. Ka dib oo dhan, haddii uu jiro qof adiga ku eegaya si uu kuugu daadiyo qaar ka mid ah dhiiggiisa magacaaga – maxaad isku dayday inaad tiraahdo ‘mahadsanid’. In la mahdiyo waa sifo fududayn karta su’aalo badan oo xidhiidh kasta ah. Mahadnaq si toos ah ayaa looga samayn karaa qalbigaaga, wakhti kasta iyo maalin kasta. Waxaa laga yaabaa in dhammaan qaybaha yaabka leh ay bilaabaan inay isu yimaadaan si ay macno noloshaada u sameeyaan. Noqo geesi, qaado jiho cusub, oo ku dheh ‘mahadsanid’ Capricorn.
Dheeraad ah ee Zodiac iyo qoto dheer ee Capricorn
Riyaha Capricorn waxaan ku haynaa allabarigii dhimashada sawirka. Kalluunka Capricorn waxaan ku leenahay dadyow badan oo allabarigu u bixiyo nolosha. Maadaama ay ku nool yihiin biyaha, kalluunka Capricorn wuxuu sidoo kale noo diyaariyaa cutubka xiga ee Sheekada Zodiac qadiimiga – Aqarius – Ninka keena wabiyada biyaha nool. Si aad u bilowdo bilawga sheekada Zodiac eeg Virgo.
Si aad u qoto dheer u gasho Sheekada Qoran ee u dhiganta Capricorn eeg:
Calaamada Qabil & Habil
Muuse & Calaamadda Kormaridda
Calaamada Haaruun – 1 Lo’ ah & 2 neef oo ari ah
Fahamka & Qaadashada Hibada Nolosha ee Isa al Masih